VILLAGE TOURISTIQUE MAHAJANGA : Tovolahy mpilasy iray vao 21 taona maty an-drano
Tovolahy iray, 21 taona no namoy ny ainy, rehefa avy sempotry ny rano, ny alahady tolakandro teo. 22 octobre 2019
Tonga teto Mahajanga nanatrika lasy niaraka tamin’ny tanora advantista izy fa avy any Antananarivo, araka ny fantatra. Ny sabotsy teo io lasy io no tapitra ary niomana ny hody ny alahady hariva izy ireo ka nitsangantsangana nijery tanàna nialoha ny hodiana. Nankeny amin’ny Village touristique rehefa avy nisakafo ary tsy nahatanty ny nahita rano fa dia nijoboka niaraka tamin’ny namany. Lasan’ny rano izy avy eo, ka rehefa nahita izany ny olona teo dia niantso ny mpamonjy voina.
Tsy nisy nandray anefa ny antson’izy ireo ary nisy nandeha nanatona tany mihitsy saingy tsy azo izy ireo. Olona teny an-toerana ihany no niezaka nanavotra azy, ka tafakatra an-tanety ihany. Efa reraka anefa satria nahatelina rano marobe ka teny an-dalana ho any amin’ny hopitaly dia namoy ny ainy. Tamin’ny volana febroary sy marsa iny dia maro ny olona namoy ny ainy teo amin’io Village touristique io. Ny farany aza dia tsy hita faty mihitsy. Maka olona io rano io, hoy ny sasany. Misy biby ao, hoy ny hafa. Misy “sable mouvant”, hoy koa ny ankilany, ary noho ny ‘courant marin’, hoy ny andaniny…. Taorian’io dia nisy ny fepetra noraisin’ny tompon’andraikitra ka nasiana mpitandro filaminana niambina teo. Ary tsy navela hisaika eo mihitsy ny olona.
Dia nangingina indray ny olona maty. Roa herinandro izay nisy tovolahy iray dobo teo ka ny olona nilalao rano sy sambo kely no nanavotra azy ary avotra soa aman-tsara izy na dia reraka aza… Hatreto dia tsy fantatra mazava ny tena antony mahafaty olona eo. Misy ny miteny hoe misy fady eo, fady kisoa sy voanjo. Ao koa ny miteny fa misy lolo noho izy akaikin’Antsahabingo, izay androan’ireo saha mitondra tromba. Manam-pahaizana momba ny tontolo iainana sy ny ranomasina iray kosa no nanazava fa rehefa miakatra na midina ny rano dia misy rian-drano miainga amin’ny kinga ivoahan’ny rano.
Midina ambany rehefa mandalo vinany ary mandeha mafy any ambany ranomasina mankeny amin’ny lalina. Raha misy olona eo anaty rano ka tafiditra amin’iny rian-drano iny dia entiny mankany ampovoany. Raha mahay milomano dia miezaka manohitra nefa mety tsy ho voatohitra iny fa reraka ary manomboka misotro rano izay mitarika faharerahana sy fahafatesana. Ny tsy mahay milomano kosa dia alentiky ny rano no sady entiny eny ampovoany ka dobo ary maty koa raha tsy voaavotra haingana. Ny fantatra mazava aloha dia mampidi-doza ny mandro na milomano eny amin’i Village Touristique io. Io anefa no ranomasina manakaiky ny tanàna ka misarika ny zaza sy tanora indrindra. Toerana mahafinaritra koa eny. Efa misy ny takelaka mandrara ny filomanosana eny saingy misy manaisotra hatrany. Tsy voatery hahambina 100% ny mpisaika eny koa anefa ny mpitandro filaminana ka miteraka famoizana aina toy izao, ny fandikana ny fandrarana. Efa nalain’ny havany moa ny razana.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68193) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (637) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (327) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (226) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (211) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (193) 18 février 2020